ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်ငံရေးပါတီကို မေးစမ်းပါရစေ - (ကျော်စွာမြင့် (ဗ .က .သ))
Submitted by Zay Thu on Thu, 03/06/2014 - 17:35
ကျွန်တော်သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်ကြသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုး မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ် ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၂ အထိ ပါဝင်ခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။
Read more about ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်ငံရေးပါတီကို မေးစမ်းပါရစေ - (ကျော်စွာမြင့် (ဗ .က .သ))
လမ်းပြောင်းပြန် ဘဂျမ်းနှင့် မျက်စိမမြင်သော ဘဲဥများ - (ဇော်သက်ထွေး)
Submitted by Zay Thu on Thu, 03/06/2014 - 17:32
တာမွေ မီးပွိုင့်တွင် နံနက် ၉နာရီခွဲ မှစ၍ ယာဉ်ကြောများ ပိတ်ဆို့လျက် ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် အရှေ့မြင်း ပြိုင်ကွင်း လမ်းမကြီးပေါ်၌ မြို့ထဲသို့ မောင်းနှင်လာသော ဘတ်စ်ကား တစ်စီးသည် တန်းစီနေသော ယာဉ်ကြောအား ပန်း၍ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကားလမ်းကို ပြောင်းပြန် မောင်းနှင်ပြီး မီးပွိုင့်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်။ ပို၍ ဆိုးသော အချက်မှာ အသွားလမ်းနှင့် အလာလမ်း နှစ်ခုကြားတွင် ကွန်ကရစ်တုံးများ ချထားသော် လည်း ယင်းကွန်ကရစ်တုံးများ တစ်ဘက်မှ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း မောင်းနှင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
Read more about လမ်းပြောင်းပြန် ဘဂျမ်းနှင့် မျက်စိမမြင်သော ဘဲဥများ - (ဇော်သက်ထွေး)
ဒီမိုကရေစီဆိုတာက . . . ဘာလဲ ? - (ဇာဂနာ)
Submitted by Zay Thu on Thu, 03/06/2014 - 17:31
တိုင်းပြည်မှာ လူတော်တော် များများက ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကို တွင်တွင် ပြောကြသည်။ တချို့ကလည်း မြန်မာတွေသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် မထိုက်တန်သေး၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဝေးသေးသည်ဟု ဆိုကြ၏။ စည်းကမ်း မရှိတာကို အပြစ်တင်၏။ ဥပဒေကို မလိုက်နာတာအား နည်းချက်တစ်ခုဟု လက်ညှိုးထိုး ကြသည်။ အမှိုက်ပုံး မရှိလို့ အမှိုက် မပစ်တာကို စည်းကမ်း မရှိဘူးလို့ မဆိုကြစေချင်။ ဥပဒေကို ကိုင်တွယ် နေသူများက မလိုက်နာ ပါပဲလျက် ပြည်သူက ဘာကြောင့် ဥပဒေကို လေးစားရိုသေ ရအံ့နည်း။
Read more about ဒီမိုကရေစီဆိုတာက . . . ဘာလဲ ? - (ဇာဂနာ)